ကျားထိုးခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျားထိုးခြင်းသည် လွန်စွာရှေးကျသော အိမ်တွင်းကစားမှု တစ်ခုဖြစ်၍၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာပင် တွေ့ရှိနိုင်လေ သည်။ ယခုရေးသားသည့် ကျားထိုးခြင်းအကြောင်းမှာ အင်္ဂလိပ် ကျားထိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျားထိုးရန်ခုံမှာ စစ်တုရင်ခုံကဲ့သို့ အဖြူအနက်ကွက်ကျား ဖော်ထားသည့်အကွက် ၆၄ ကွက် ပါရှိ သော စက္ကူချပ်ထူ သို့မဟုတ် သစ်သားခုံဖြစ်လေသည်။ ကျား များမှာ သစ်သား သို့မဟုတ် အမာခံဝတ္ထုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အပြားဝိုင်းကလေးများဖြစ်လျက် အဖြူအနက် ခွဲခြားထားလေ သည်။ ကျားထိုးခြင်းကို လူ နှစ်ယောက်သာ ကစားနိုင်သည်။ စ၍ကစားရာတွင် တစ်ယောက်က ကျားအဖြူ ၁၂ ကောင်ကို ယူ၍၊ အခြား တစ်ယောက်က ကျားအနက် ၁၂ ကောင်ကို ယူပြီးလျှင် မိမိဖက် နောက်ဆုံးသုံးတန်းရှိ အနက်ကွက်များ ပေါ်တွင် ချထားရသည်။
ကစားရန် ကျားကွက်တွင် ကျားများကို အသင့်စီထားပုံ
ကျားထိုးသည့်အခါ မိမိနှင့်ဆိုင်ရာကျားများကို တစ်လှည့်စီ တစ်ကွက်ကျ ရွေ့သွားရသည်။ ကျားအနက်ကို ယူသောသူသည် ဦးဆုံးစတင်၍ ရွေ့ရ၏။ ပွဲပြီးသည့်အခါ ကျားများကို လဲလှယ် ၍ ကစားရလေသည်။ ကျားများကို ရှေ့တည့်တည့်အကွက်သို့ မရွေ့ရချေ။ ရှေ့ဖက်ဗယ်ညာ ထောင့်တန်းအကွက်များ ရှိသည်တွင် လစ်လပ်နေသော အနက်ကွက်သို့ ရွေ့ရသည်။ နောက်သို့ ပြန်၍မရွေ့နိုင်ချေ။ ရန်သူကျားသည် မိမိကျား၏ အရှေ့ကွက်တွင် ရှိ၍၊ ထိုရန်သူကျား၏ နောက်ဖက်ရှိအကွက် သည် လပ်နေခဲ့လျှင်၊ မိမိ၏ကျားသည် ရန်သူ ကျားကိုကျော်၍ ကွက်လပ်သို့ခုန် ကာ နေရာယူလိုက်ပြီးလျှင် ရန်သူကျားကို စားနိုင်လေသည်။ ထိုအကွက်နှင့် ဆက်၍ တည့်တည့်ဖြစ်စေ၊ ထောင့်ချိုးဖြစ်စေ၊ တစ်ကွက်ကျော်လွတ်နေသေးလျှင် ရန်သူ ကျားနှစ်ကောင် သုံးကောင်လုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း၌ပင် စားလိုက်နိုင်သည်။ စားလိုက်သောကျားများကို ကျားခုံပေါ်မှ ဖယ်ယူထားရ၏။ ဤသို့ဖြင့် ကျားတစ်ကောင်သည် ရန်သူ၏နောက်ဆုံးတန်းသို့ ရောက်ရှိသွားလျှင် ထိုးကျားကို အရောင်တူကျားတစ်ကောင် ထပ်ဆင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဘုရင်မြှောက်လိုက်ရလေသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို ကင်းခေါ် ကျားကြီးပေးရသည်ဟုခေါ်သည်။ ကင်းသည် လွန်စွာတန်ခိုးကြီး ၏။ မိမိနေရာ အကွက်မှ ရှေ့သို့ ဖြစ်စေ၊ နောက်သို့ဖြစ်စေ၊ ထောင့်ချိုး အတိုင်း လေးဖက်လေးတန် ကွက်တူနေရာလပ်တို့ သို့ လိုသလိုတက်နိုင်၊ ဆုတ်နိုင်၊ ကျော်နိုင်၊ စားနိုင်သည်။ ကင်းသည် ထိုမျှအခွင့်အရေးရသော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အရွေ့မှားသွား ပါက သာမာန်ရန်သူကျား၏ အစားကို ခံရတတ်သည်။ ကျားများအားလုံး အစားခံရသည့်အခါဖြစ်စေ၊ ပိတ်မိနေသည့်အခါဖြစ်စေ၊ ထိုကျားများကို ကိုင်၍ ကစားသူ သည် ရှုံးလေတော့သည်။
တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် အပြီးအပိုင် အနိုင်မကစားနိုင်ဘဲ ကျားကွက်လည်နေသောပွဲကို သရေပွဲဟု ခေါ်သည်။ ကျားများကို ရွေ့မိလျှင် ပြန်၍မချရတော့ဘဲ ဆက်၍သာ ရွေ့သွားရ၏။ ရွေ့ပြီးသောကျားကိုလည်း ပြန်၍ ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့် မရှိချေ။ စည်းကမ်းတစ်ခုအရဆိုသော်၊ ရန်သူကျားကို စားနိုင်သောအခွင့်အရေးရလျက် မစားဘဲနေခဲ့လျှင် ထိုမစား သောကျားကို တစ်ဘက်ကစားသူက သိမ်းယူနိုင်ခွင့်ရှိလေသည်။ ကျားထိုးခြင်းသည် လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း၍ လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသားများသာမက၊ လူအများပင် နှစ်သက်ကြသော ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်၏။ ထိုကစားနည်းမှာ အပျင်းဖြေသဘောမျှသာမဟုတ်၊ ထိုးထွင်းဉာဏ်ထက်သန်စေရန် အတွက်လည်း များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော ကစားနည်း တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။
ကစားနည်း အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး နိုင်ငံအလိုက်နှင့် နေရာဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျား (ပိုလန် ကျား) ၁၀ × ၁၀ ၂၀ ရှိ ရှိ အဖြူ အများစားရမည် ကျားသည်နောက်ဆုံးတန်းတွင်ရပ်မှသာ ကင်းဖြစ်သည်။ ဖြတ်သွားရုံနှင့်မဖြစ်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ကျား ၈ × ၈ ၁၂ မရှိ မရှိ အနက် အနည်းအများကြိုက်ရာစားနိုင်သည်၊ စားလို့ရသလောက်ကုန်အောင်စားရမည်။ ?
ဘရာဇီးကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ ရှိ အဖြူ အများစားရမည် ?
ဂါနာကျား ၁၀ × ၁၀ ၂၀ ရှိ ရှိ အဖြူ အနည်းအများကြိုက်ရာစားနိုင်သည်၊ စားလို့ရသလောက်ကုန်အောင်စားရမည်။ စားနေစဉ် ကင်းရသည့်အကွက်ကိုဖြတ်သွားပါက ကင်းမယူရပါ ?
ကနေဒါကျား ၁၂ × ၁၂ ၃၀ ရှိ ရှိ အဖြူ အများစားရမည် ?
မလေး/စင်္ကာပူကျား ၁၂ × ၁၂ ၃၀ ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်မရှိ စားကိုစားရမည်။ ?
ဂျာမနီကျား ၁၀ × ၁၀ ၂၀ ရှိ ရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ သို့သော်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်မှာ ကင်းကို ၁ ကောင်ခွဲသတ်မှတ်သည်။ ဘေးတိုက် နောက်ပြန် ကြိုက်သလိုစားနိုင်သည်။ ?
ပူးလ်ကျား (Pool Checker) ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ ရှိ အနက် အနည်းအများကြိုက်ရာစားနိုင်သည်၊ စားလို့ရသလောက်ကုန်အောင်စားရမည်။ သုံးကောင်/တစ်ကောင် ကျန်သည့်အချိန်တွင် ၁၃ ကွက်အတွင်းမမိမဖမ်းနိုင်ပါက သရေဖြစ်သည်။
စပိန်ကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ ကင်းအရေအတွက်များသည့်ဘက်ကို စားရမည်။ ?
ရုရှကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ ရှိ အဖြူ အနည်းအများကြိုက်ရာစားနိုင်သည်၊ စားလို့ရသလောက်ကုန်အောင်စားရမည်။ ?
အီတလီကျား ၈ × ၈ ၁၂ မရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ သို့သော် ကင်းနှင့် ကျား နှစ်မျိုးဖြင့်စားစရာရှိလျှင် ကင်းနှင့်သာစားရမည်။ ?
ချက်ဇ် ကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ သို့သော် ကင်းနှင့် ကျား နှစ်မျိုးဖြင့်စားစရာရှိလျှင် ကင်းနှင့်သာစားရမည်။ ?
အာဂျင်တီးနားကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ ကင်းအရေအတွက်များသည့်ဘက်ကို စားရမည်။ ?
ထိုင်းကျား ၈ × ၈ ၈ ရှိ မရှိ အနက် အနည်းအများကြိုက်ရာစားနိုင်သည်၊ စားလို့ရသလောက်ကုန်အောင်စားရမည်။ စားလိုက်သောကျားကို ချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ ကင်းသည် စားပြီးသော ကျား၏ကပ်လျှက်အကွက်တွင်သာရပ်ရမည်၊ ထိုမှ ဆက်၍စားရန်ရှိလျှင် စားနိုင်သည်။
တူရကီကျား ၈ × ၈ ၁၆ ရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ ကျားသည် နောက်ဆုံးတန်းသို့ရောက်လျှင် ကင်းဖြစ်သည်။ ထိုကင်းသည် စစ်တုရင်မှ ရထားကဲ့သို့ ရွေ့လျားသွားနိုင်သည်။ ထိုကင်းကို မိုးပျံကင်းဟုခေါ်သည်။
မြန်မာကျား ၈ × ၈ ၁၂ ရှိ မရှိ အဖြူ အများစားရမည်။ ကစားသူနှစ်ဦးသည် "စားကိုစားရမည် နှင့် မစားရင် ဒဏ်တပ်မည်" ဆိုသည်ကို မကစားခင် သဘောတူညီထားနိုင်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျားထိုးခြင်း&oldid=456886" မှ ရယူရန်
၉ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။